अध्याय ८२ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरा वचनहरू सुनेर, सबै भयभीत हुन्छन्; हरेक व्यक्ति डरले थरथर काम्छ। तिमीहरूलाई केको डर लाग्छ? मैले तिमीहरूलाई मार्नेछैन! यो त तिमीहरूलाई ग्लानि भएकोले गर्दा हो; तिमीहरूले मेरो पछाडि जे गर्छौ त्यो अत्यन्तै तुच्छ र व्यर्थ छ। यसले गर्दा मलाई तिमीहरूप्रति यति घृणा लागेको छ कि मलाई मैले पूर्वनिश्चित नगरेका र नचुनेका प्रत्येकलाई अतल कुण्‍डमा टुक्रा-टुक्रा हुने गरी फ्याँकिदिन पाएको भए नि हुनेथियो भन्‍ने उत्कट इच्‍छा लाग्छ। तैपनि, मसँग मेरो योजना छ; मेरा आफ्‍नै लक्ष्यहरू छन्। अहिलेको लागि म तेरो दयनीय जीवनलाई केही पनि गर्नेछैन, र मप्रतिको तेरो सेवा पूरा नभइञ्‍जेलसम्‍म तँलाई निकाल्‍नेछैन। म त्यस्ता प्राणीहरूलाई हेर्न चाहन्‍न; तिनीहरू मेरो नामको अपमान हुन्! के तँलाई यो कुरा थाहा छ? के तैँले बुझिस्? काम नलाग्‍ने अभागीहरू! यो कुरालाई तेरो खोपडीमा हाल्! जब तँलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यसो गर्ने म नै हुँ, र जब तँलाई प्रयोग गरिँदैन, त्यो पनि मैले गर्दा नै हुन्छ। सबै कुरालाई म नै योजनाबद्ध गर्छु, र मेरा हातमा सबै कुराले ठीक-ठीक व्यवहार गर्छन् र सुव्यवस्थित हुन्छन्। ज-जसले तलमाथि गर्ने आँट गर्छ त्यसलाई तुरुन्तै मेरो हातले प्रहार गर्नेछ। म प्रायजसो “प्रहार गर्छ” भनेर भन्छु; के मैले त्यो मेरो आफ्‍नै हातले गर्छु भन्‍ने तँलाई लाग्छ? मैले त्यसो गरिरहनु पर्दैन! मेरा कार्यहरू मानवले कल्‍पना गरेजस्तो मूर्ख छैनन्। सबै कुरा मेरा वचनहरूले स्थापित हुन्छन् र पूरा गरिन्छन् भनेर भन्‍नुको अर्थ के हो? मैले औंला समेत नउचालीकन सबै कुरा पूरा गरिन्छ। के तैँले मेरा वचनहरूको साँचो अर्थलाई बुझिस् त?
मेरो सेवा गर्ने कसैलाई पनि म मेरो मुक्ति दिनेछैन; मेरो राज्यमा तिनीहरूको कुनै पनि हिस्सा छैन। किनभने यी मानिसहरू मेरो इच्‍छालाई पूरा गर्नको सट्टा, बाहिरी कुराहरूमा मात्रै व्यस्त हुन्छन्। मैले अहिले तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको भए पनि, वास्तविकतामा, मैले सबैभन्दा बढी घृणा गर्ने मानिसहरू तिनीहरू नै हुन्; मलाई सबैभन्दा बढी घिन लाग्‍ने मानिसहरू। आज, ज-जसले मेरो इच्‍छा पूरा गर्न सक्छन्, ज-जसले मेरा बोझहरूलाई उचित ध्यान दिन सक्छन्, र ज-जसले साँचो हृदय र इमानदारिताको साथ आफ्‍नो सम्पूर्णता मलाई दिन सक्छन् तिनीहरूलाई म प्रेम गर्छु। म तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा अन्तर्दृष्टि दिनेछु, र तिनीहरूलाई मबाट फुत्केर टाढा हुन दिनेछैन। म प्रायजसो भन्‍ने गर्छु, “मेरो लागि इमानदारपूर्वक खर्चिनेहरूलाई म अवश्य नै धेरै आशिष्‌ दिनेछु।” “आशिष्‌” ले केलाई जनाउँछ? के तँलाई थाहा छ? पवित्र आत्‍माको वर्तमान कार्यको प्रसङ्गमा, यसले मैले तिमीहरूलाई दिने बोझहरूलाई जनाउँछ। मण्डलीको लागि बोझ बोक्‍न सक्‍ने, र मेरो खातिर आफूलाई इमानदारितापूर्वक अर्पण गर्न सक्‍नेहरू सबैका लागि, तिनीहरूका बोझ र तिनीहरूको तत्परता दुवै मबाट आउने आशिष्‌ हुन्। यसको साथै, मैले तिनीहरूलाई दिने प्रकाशहरू पनि मबाट तिनीहरूले पाउने आशिष्‌ नै हुन्। किनभने जोसँग हाल बोझ छैन तिनीहरूलाई मैले पूर्वनिश्चित र छनौट गरेको होइन; तिनीहरूमाथि मेरो श्रापहरू परिसकेका छन्। अर्को शब्‍दमा भन्दा, मैले पूर्वनिश्चित गरेका र छनौट गरेकाहरू मैले भनेका कुराहरूको सकरात्मक पक्षहरूमा सहभागी हुन्छन्, जबकि मैले पूर्वनिर्धारित नगरेका र छनौट नगरेकाहरू मेरा वाणीहरूका नकरात्मक पक्षहरूमा मात्रै सहभागी हुन्छन्। मेरा वचनहरू जति धेरै बोलिन्छन्, तिनीहरूको अर्थ त्यति नै बढी स्पष्ट हुन्छ; म ती जति धेरै बोल्छु, ती त्यति नै बढी पारदर्शी बन्छन्। कुटिल र छलीहरू, र मैले पूर्वनिश्चित नगरेकाहरू हरेकलाई संसारको सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले नै मैले श्राप दिइसकेको थिएँ। तिमीहरूको जन्‍मको वर्ष, महिना, दिन, र घण्टा, मिनेट, र सेकेन्डसमेत सबैलाई मैले उपयुक्त रूपमा योजनाबद्ध गरेको छु भनेर किन भनिन्छ? कसले ज्येष्ठ पुत्रहरूको हैसियत प्राप्त गर्नेछन् भनेर मैले धेरै पहिले नै पूर्वनिश्चित गरेको छु। तिनीहरू सबै मेरो नजरमा छन्; तिनीहरूलाई मैले बहुमूल्‍य ठानेको धेरै भइसक्यो, र मेरो हृदयमा राखेको धेरै भइसक्यो। मैले बोल्‍ने हरेक वचनमा गहनता छ र तिनमा मेरा विचारहरू छन्। मानिस के हो त? मैले प्रेम गर्ने, ज्येष्ठ पुत्रहरूको हैसियत पाएकाहरूले बाहेक अरूले मेरो इच्‍छाप्रति कति थोरै वास्ता राख्छन्? मेरा पुत्रहरूको मूल्य कति छ? मेरा मानिसहरूको मूल्य कति छ? विगतमा, “मेरा पुत्रहरू” ले मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई जनाउँथ्यो, तर कुनै लाज नभएका मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूले यो तिनीहरू आफैका निम्ति आदरणीय नाम हो भन्‍ने ठाने। लाजविहीन भई मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूको भूमिका निर्वाह नगर्। के तँ यो नाम-पदवीको योग्य छस्? आज, मेरो सामुन्ने महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा राखिएका मानिसहरू मात्रै प्रमाणित भएकाहरू हुन्; यी मानिसहरूले ज्येष्ठ पुत्रहरूको हैसियत प्राप्त गरेका छन्। तिनीहरूले पहिले नै मेरो सिंहासन, मेरो मुकुट, मेरो महिमा, र मेरो राज्यमा उत्तराधिकार प्राप्त गरिसकेका छन्। मैले सबै कुराहरूको सावधानीका साथ बन्दोबस्त मिलाएको छु। आज ज्येष्ठ पुत्रहरूको हैसियत प्राप्त गरेकाहरू सबै ठूलो पीडा, सतावट, र सङ्कष्टबाट गुज्रेका छन्, जसमा तिनीहरूले जन्‍मदेखि आफ्‍नो परिवारमा, आफ्‍नो व्यक्तिगत सम्भाव्यता, काम, र विवाहमा जे अनुभव गरेका छन्, त्यो पनि पर्छ। यी ज्येष्ठ पुत्रहरूले मूल्य नचुकाईकन यो हैसियत पाएका होइनन्; बरु, तिनीहरू पहिले नै जीवनको सबै पक्षहरूबाट गुज्रेर आइसकेका छन्: असल र खराब, उकाली र ओराली। पहिले संसारका मानिसहरूले उच्‍च आदरको दृष्टिकोणले हेर्ने, र घरमा सहजताको जीवन जिइरहेकाहरूसँग, ज्येष्ठ पुत्रहरूको उत्तराधिकार छैन। तिनीहरू ज्येष्ठ पुत्र बन्‍न योग्य छैनन्; तिनीहरूले मेरो नाममा अपमान ल्याउँछन्, र म तिनीहरूलाई बिलकुलै चाहँदिनँ। मैले चुनेका मेरा पुत्रहरू र मेरा मानिसहरूको संसारमा राम्रो मान-मर्यादा पनि छ, तर तिनीहरू मेरो ज्येष्ठ पुत्रहरूको स्तरभन्दा निकै तल छन्। मैले अहिले निश्‍चित मानिसहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छु, तर तिनीहरूमध्ये धेरै त मेरा मानिसहरू बन्‍न योग्य समेत छैनन्। तिनीहरू अनन्त विनाशका पात्रहरू मात्रै हुन्; तिनीहरूलाई कही समय मेरो सेवाको निम्ति प्रयोग गरिएको छ, तर तिनीहरू दीर्घकालीन प्रयोगको लागि होइनन्। मेरो हृदयको गहिराइमा, मैले क-कसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गरिने हो सो निर्णय गरिसकेको छु। अर्थात्, मैले जसलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्छु, तिनीहरू नै मैले प्रेम गर्नेहरू हुन्, र मैले तिनीहरूलाई धेरै पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्न सुरु गरेको हुँ। अर्को शब्‍दमा भन्दा, तिनीहरूका कार्यहरू पहिले नै तय गरिसकिएको छ। मैले तिरस्कार गर्ने मानिसहरूका हकमा भन्दा, हालको चरणमा, तिनीहरूलाई अस्थायी रूपमा मात्रै प्रयोग गरिँदैछ। जब विदेशीहरू आउँछन्, त्यही बेला तिमीहरूको सामुन्ने ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्रकट गरिनेछ।
अहिले भने म तिमीहरूलाई शीघ्र रूपमा वृद्धि होओ र मेरो बोझलाई बुझ भनेर निर्देशन दिन्छु। यो बोझ त्यति ठूलो छैन, र म तिमीहरूलाई आफ्‍नो क्षमताअनुसार मात्रै काम गराउनेछु। मलाई तिमीहरूको कद थाहा छ; तिमीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्‍ने कार्य मलाई थाहा छ। यो सबै मलाई थाहा छ, र म यी कुराहरूलाई बुझ्छु; मेरा पुत्रहरू, म तिमीहरूबाट के मात्रै चाहन्छु भने, तिमीहरूले स्वेच्छिक रूपमा आफैलाई इन्कार गर्न र मैले प्रेम गर्ने कुरालाई सच्‍चा रूपमा प्रेम गर्न, मैले जे घृणा गर्छु त्यसलाई घृणा गर्न, मैले जे गर्छु त्यो गर्न, र मैले जे भन्छु त्यो भन्‍न सक। अन्तरिक्ष, भूगोल, समय, वा अरू कुनै पनि व्यक्तिद्वारा नियन्त्रित नहोओ। तिमीहरूका आत्मा जताततै स्वतन्त्र होओस्, र तिमीहरू प्रत्येक नै मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूको स्थानमा खडा हुन सक भन्‍ने नै मेरो कामना हो। आज कसले आफ्‍नो सम्पूर्णता मलाई सुम्‍पन सक्छ? कसले निष्ठावान रूपमा आफूलाई अर्पण गर्न सक्छ? को दिन-रात मेरो खातिर जागा रहन्छ? कसले मेरो खातिर मेरो घरका मामलाहरूलाई सञ्‍चालन गर्छ? कसले मेरो काँधका बोझहरूलाई मेरो खातिर हल्का गराउँछ? के तिनीहरू मेरा पुत्रहरू होइनन् र? मेले गर्ने सबै कुरा मेरा पुत्रहरूलाई सिद्ध पार्नको लागि हो र मेरा पुत्रहरूको सेवाको लागि गरिन्छ। के तिमीहरूले बुझ्यौ त? सबै कुरा मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूको लागि हो, र म कुनै गल्ती गर्दिनँ। म मानिसहरूलाई गलत रूपमा मूल्याङ्कन गर्छु भनेर निरन्तर गलत बुझाइ नगर्, र म तँलाई नीच नजरले हेर्छु भन्‍ने नसोच्। म महान् प्रतिभालाई कम रूपमा प्रयोग गर्छु, वा तँलाई पूर्वनिश्चित नगरेर मैले गल्ती गरेँ भनी अनुमान नगर्। यो त्यस्तो होइन; कुरा के हो भने तँ यसको योग्य छैनस्! के तँलाई त्यो कुरा थाहा छ? अब म तिमीहरूका लागि केही कुराहरू स्पष्ट गर्नेछु: ज-जसले बारम्‍बार मेरो क्रोध जगाउँछन् र जो-जो मेरो आलोचना वा निराकरणको पात्र बन्छन्, तिनीहरू अवश्य नै मेरो घृणाको पात्र हुन्छन्। त्यस्ता मानिसहरू अवश्य नै मर्नेछन्—यो कुरा शिलालेख गरिएको छ। मैले भनिसकेको छु, म अबउप्रान्त मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूलाई निराकरण गर्नेछैन, किनभने यी मानिसहरूले पहिले नै मेरो गम्भीर जाँचहरूमार्फत गुज्रिसकेका छन् र मेरो स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका छन्। मैले जसलाई कठोर नजरले हेरेको छु त्यो खतरामा हुन्छ। के तिमीहरूलाई डर लागेको छैन? मेरो मुखबाट मेरा वचनहरू निस्कनेबित्तिकै धेरै मानिसहरू मर्नेछन्। तैपनि, कतिले चाहिँ अझै पनि आफ्‍नो देहलाई कायम राख्‍नेछन्; यति मात्रै हो कि तिनीहरूका आत्मा मरिसकेका हुनेछन्। तिनीहरूको सबैभन्दा स्पष्ट सूचक के हो भने तिनीहरूसँग पवित्र आत्‍माको कार्य हुँदैन र तिनीहरूलाई पछाडि तानेर ल्याउने कुनै कुरा नै हुँदैन। (तिनीहरूलाई पहिले नै शैतानले गहन रूपमा भ्रष्ट तुल्याइसकेको हुन्छ।) जब-जब तिनीहरूको देहलाई नष्ट गरिन्छ, तब यो मेरो उचित योजनापछि र मैले तोकेको समयमा हुन्छ। तिनीहरूको आत्मिक मृत्युले मेरो लागि कुनै पनि ठूलो सेवा गर्न सक्दैन; म मेरा कार्यहरूको अद्भुतता प्रदर्शन गर्नको लागि तिनीहरूको देह प्रयोग गर्नेछु। यसबाट, मानिसहरू विश्‍वस्त हुनेछन्; तिनीहरूले अटुट प्रशंसा दिनेछन्, र मेरो आदर नगर्ने र डर नमान्‍ने एक जना पनि हुनेछैनन्। म कुनै पनि विवरणलाई हल्‍कासँग लिँदिनँ; सबै मेरो लागि नै जिउनु वा मर्नुपर्छ, र मेरो निम्ति आफ्‍नो सेवा प्रस्तुत नगरेसम्‍म कोही पनि जान पाउँदैन। मेरो निम्ति आफ्‍नो सेवा पूरा नगरेसम्‍म शैतान समेत अतल कुण्‍डमा फर्कन सक्दैन। मैले लिने हरेक कदम स्थिर र सुरक्षित हुन्छ, र ठोस जगमा हुन्छ; मैले लिने कुनै पनि कदम अव्यवहारिक हुँदैन—अलिकति पनि अव्यवहारिक हुँदैन।
कसले मसँग तुलना गर्ने आँट गर्छ? कसले मेरो विरोध गर्ने आँट गर्छ? म तँलाई तुरुन्तै प्रहार गर्नेछु! म कुनै पनि नाम-निशाना छोड्नेछैन, र तेरो देहलाई मेटाइदिइनेछ; यो पूर्णतया सत्य कुरा हो। जब म यी कुराहरू भन्छु, म ती कार्य तुरुन्तै गरिहाल्छु, र फर्कने कुनै उपाय हुनेछैन। संसार दिन-प्रतिदिन टुक्रा-टुक्रा हुँदैछ, र मानवजाति दिन-प्रतिदिन नष्ट हुँदैछ। बितेर जाने हरेक दिनसँगै मेरो राज्यले आकार लिँदैछ, र मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरू वृद्धि हुँदैछन्। दिन-प्रतिदिन, मेरो क्रोध बढ्दैछ, मेरा सजायहरू झन्-झन् प्रचण्ड हुँदैछन्, र मेरा वचनहरू झन्-झन् कठोर हुँदैछन्। तिमीहरू अझै पनि मैले तिमीहरूसँग नरम बोलूँ, र मेरो स्वर नरम होस् भनेर पर्खिरहेका छौ, तर फेरि सोच! मेरो स्वर मैले कस्ता मानिसहरूको सामना गरिरहेको छु त्यही कुरामा निर्भर हुन्छ। मैले प्रेम गर्नेहरूका लागि, मेरो स्वर कोमल र सधैँ सान्त्वना दिने किसिमको हुन्छ, तर तिमीहरूलाई त म कठोरता र न्याय मात्रै देखाउन सक्छु, त्यसमाथि म सजाय र क्रोध थप्छु। कसैलाई थाहै नभई, संसारको हरेक देशको स्थिति झन्-झन् तनावग्रस्त भइरहेको छ, र दिन-प्रतिदिन टुक्रिँदै कोलाहलमा गिरिरहेको छ। हरेक देशका नेताहरूले अन्त्यमा शक्ति पाउने आशा गर्छन्। मेरो सजाय तिनीहरूमा पहिले नै आइसकेको छ भन्‍ने तिनीहरूलाई थाहै छैन। तिनीहरू मेरो शक्ति जफत गर्न चाहन्छन्—तर तिनीहरूको त्यो इच्‍छा त कल्‍पना मात्र हो! संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाले समेत मलाई माफीको लागि बिन्ती गर्नुपर्छ। उसले गरेका दुष्ट कार्यहरू अनगिन्ती छन्। अहिले सजायको समय हो, र म उसलाई सहजै जान दिनेछैन। शक्तिमा हुनेहरू सबैले आ-आफ्‍ना मुकुट फुकाउनुपर्छ; सबै थोकमाथि शासन गर्न योग्य म मात्र छु। सबै कुराले ममा नै भर पर्छ—एक-दुई जना विदेशीहरूलगायत, यो सबै मेरै भरमा छ। मेरो छानबिन गर्ने जो-कसैलाई म तुरुन्तै प्रहार गर्नेछु, किनभने मेरो काम यहाँसम्‍म आइपुगेको छ। हरेक दिन नयाँ प्रकाश देखिन्छ; हरेक दिन नयाँ ज्योति आउँछ। सबै थोक झन्-झन् पूर्ण हुँदैछन्। शैतानको अन्तिम दिन झन्-झन् नजिक आउँदैछ र यो झन्-झन् स्पष्ट हुँदैछ।
अघिल्लो: अध्याय ८१
अर्को: अध्याय ८३